Zanu PF Inobuda neZvisungo Zvichanetsa Kuzadzisa
Zvita 12, 2011
Bato reZanu PF rinoti zvisungo zvarakabuda nazvo kumusangano waro uchangopera kuBulawayo, zvichabatsira kwete vatsigiri vebato iri chete, asi kuti mhuri yose yeZimbabwe.
Bato iri rakabuda nezvisungo zvakawanda kwazvo, zvimwe zvacho zvichada kuti Zanu PF igare pasi nemamwe mapato ari muhurumende yemubatanidzwa.
Zanu PF iri kupomerawo gurukota rezvemari, VaTendai Biti, mhosva yekunyima mari kumapazi anotungamirwa nemakurukota eZanu PF, senzira yekuitadzisa kuzadzisa zvisungo zvainenge yabuda nazvo kumisangano yayo.
Vachisvitsa zvisungo zvebato ravo mukupetwa kwemusangano uyu, munyori wezvemutemo muZanu PF, VaEmmerson Mnangagwa, vakati bato ravo rakasunga kuti patorwe matanho anoita kuti VaBiti vamire zvavanonzi vari kuita izvi.
Zvimwe zvisungo zvakabudwa nazvo neZanu PF zvinosanganisira kurudziro yekuti mari yemunyika idzoke, uye ishandiswe pamwe chete nedzimwe mari dzekunze dziri kushanda munyika pari zvino.
Madzishe akanzi anofanirwa kupihwawo masimba akawedzerwa kuitira kuti vaite basa nemazvo mumatunhu avanomirira.
Zanu PF yakasungawo zvakare kuti mutungamiri waro, VaRobert Mugabe, ndivo vachamirira bato iri musarudzo, uye nhepfenyuro kana mapepanhau vachaburitsa zvinenge zvabuda musarudzo zvisiri pamutemo vanofanirwa kutorerwa marezinesi avo.
Masangano akazvimirira haanawo kusiiwa nezvisungo izvi sezvo akanzi achapinda munyaya dzezvematongerwo enyika achanyimwawo mvumo yekushanda ari munyika.
Asi dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti izvi ndizvo zvagara zvichiitwa neZanu PF kana nyika yatarisana nesarudzo, zvekutyisidzira vanhu.
Mutauriri weZanu PF, VaRugare Gumbo, vanoti bato ravo richagara pasi nemamwe mapato ari muhurumende yemubatanidzwa kuitira kuti vaone kuti zvimwe zvezvisungo izvi zvazadziswa.
Asi mutauriri weMDC inotungamirirwa naVaMorgan Tsvangirai, VaDouglas Mwonzora, vaudzawo Studio 7 kuti bato ravo harineyi nezvisungo zveZanu PF izvi, sezvo bato roga roga riri muhurumende yemubatanidzwa rakazvimirira.